भगवान् विष्णुको आराधना गर्ने दिन, यस्तो छ एकादशीको महत्व | Rajmarga
एकादशी भगवान् विष्णु वा नारायणसँग सम्बन्धित पर्व हो। सनातन धर्मावलम्बीले एकादशीभन्दा अष्टमी, पूर्णिमा र औँसीजस्ता तिथिलाई बढी महत्त्व दिने गरे पनि वैष्णव सम्प्रदायको प्रभाव बढ्दै गएको समाजमा एकादशीको पनि महत्त्व बढ्दै गएको हो।
एकादशीका दिन अन्न नखाने, बेलुकी एक छाक रोटी खाने, द्विदल भएका वस्तु (केराउ सिमीजस्ता) तरकारी नखाने परम्परा छ। वैष्णव धर्म नलिएकाले पनि एकादशीका दिन मांसाहार नगर्नेजस्ता नियम बारेको पाइन्छ। एकादशीका दिन विशेषगरी भगवान् विष्णुको पूजा आराधना गर्ने माहत्म्य सुन्नेजस्ता काम गरिन्छ। काठमाडौंको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने चार नारायण, बूढानीलकण्ठजस्ता नारायणका मन्दिरमा घुइँचो लाग्छ। एकादशी महिनामा दुई पटक पर्छ, शुक्ल पक्षमा एउटा र कृष्णमा अर्को ।
यो हिसाबले वर्षमा २४ वटा एकादशी हुन्छन्। तर अधिकमास परेको वर्ष दुईवटा थपिन्छन्। सामान्यतया मार्ग(मंसिर)कृष्ण पक्षको एकादशीलाई पहिलो र कार्तिक शुक्ल एकादशीलाई अन्तिम एकादशी मानिन्छ। विभिन्न पुराणमा एकादशीको उत्पत्ति, माहत्म्य र फलबारे बताइएको छ। एकादशी माहत्म्यमा पनि प्रत्येक यो दिन गर्न हुने÷नहुने विषय बताइएको छ।
यी हुन् वर्षभरि पर्ने एकादशी—
उत्पत्तिका– मार्ग कृष्ण पक्ष
मोक्षदा– मार्गशुक्ल पक्ष
षट्तिला– माघ कृष्ण पक्ष
जया\_भीमा– माघ शुक्ल पक्ष
विजया– फाल्गुण कृष्णपक्ष
आमलकी– फाल्गुण शुक्ल पक्ष
पापमोचनी– चैत्र कृष्ण पक्ष
कामदा– चैत्र शुक्ल पक्ष
बरुथिनी– वैशाख कृष्ण पक्ष
मोहिनी– वैशाख शुक्ल पक्ष
अपरा– जेष्ठ कृष्ण पक्ष
निर्जला– जेष्ठ शुक्ल पक्ष
योगिनी– आषाढ कृष्ण पक्ष
हरिशयनी– आषाढ शुक्ल पक्ष
कामिका– श्रावण कृष्णपक्ष
पुत्रदा– श्रावण शुक्ल पक्ष)
अजा– भाद्र कृष्ण पक्ष
हरिपरिवर्तिनी भाद्र– शुक्ल पक्ष
इन्दिरा– आश्विन कृष्ण पक्ष
पापाङ्कुशा– आश्विन शुक्ल पक्ष
रमा– कार्तिक कृष्ण पक्ष
हरिबोधिनी– कार्तिक शुक्ल पक्ष
अधिक(मल)मासमा पद्मिनी– शुक्ल पक्ष
परमा– कृष्ण पक्ष
Previous post: डा. केसीको अनशन २३औं दिनमा: न वार्ता, न उपचार ! खै सरकार ?
Next post: घरघरमा तुलसी रोपेर हरिशयनी एकादशी पर्व मनाइँदै, यस्तो छ तुलसी रोप्नुको महत्व